China Hills isitulo sokutyela ilaphu (Teak armrest) Ukuvelisa kunye neFactory |Tailong
Uyilo Hills yokutyela iseti idibanisa ubuhle bendalo kunye noshishino, ngokusebenzisa isakhelo intsimbi stainless kunye teak ezintle slats phezu kwetafile kunye armrest isitulo.Ngeli xesha, kuthathelwa ingqalelo imvakalelo yokuthuthuzela ngexesha lokuhlala, iyila ngegophe elingasemva inxalenye kunye nendawo yokuhlala kunye nokutshatisa i-textilene ethambileyo.Ngaphandle kwezinto ezilungileyo kunye noyilo olugqibeleleyo, ubugcisa obugqwesileyo bongeza umgangatho weseti yokutyela epheleleyo.
Hills dining chair (Teak armrest)
UYILO LOMGCA OGXEKO
Inxalenye yangasemva kunye netyhubhu yangaphambili yendawo yokuhlala yesi sihlalo ithathelwe ingqalelo kunye nejika le-physiological of the back back and imilenze ngexesha lokuhlala, ukuvumela ulonwabo olupheleleyo lokuhlala.
Inomphezulu ococekileyo ogqityiweyo, obonisa isitulo esilula kodwa esiphakamileyo.Okwangoku, ehonjiswe nge-teak slat yendalo kwi-armrest, evumela abantu ukuba bafumane imvakalelo elungileyo yesandla.
ISIHLALO SE-TEXTILENE KUNYE NENdawo yangasemva
Ukusebenzisa i-textilene yokuhlala kunye nenxalenye engasemva enomsebenzi omhle kwindawo yangaphandle, i-waterproof, i-anti-umswakama, ikhawuleza-yomile njalo njalo.Kwaye ukubamba okuthambileyo kwenza abantu bakhululeke kakhulu ngexesha lokusetyenziswa.
Ukuze kwandiswe indawo yokugcina, isitulo sokutyela sase-Hills sithatha isakhiwo esixutywe, esilungele iindawo zokutyela kunye needili.
* Ilaphu ekumgangatho ophezulu 2*2 yokuluka
* Umbala we-textilene unokwenziwa ngokwezifiso
*I-15mm ubukhulu beteki yaseMzantsi Melika
Hills yokudlela isitulo
Hills Textilene Dining Chair Bonisa
Haig itafile yolwandiso (Teak top)
Ngaphambili: I-Naples iphumla isitulo esinesihlalo seenyawo
Okulandelayo: Iinduli zetafile yoxande ( Teak top)
Isitulo sokutyela esilahliweyo saseDa Vinci
Luca isitulo sokutyela i-textile
Isitulo se-Snow White Textile (Poly Wood)